भनभन भाइ हो – के भन्ने ! ओलीलाई राजीनामा – दे.भन्ने !! -
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार ०९:४७
खवरबाटिका २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ०९:४७ 1 min read
काठमाण्डाै – सरकारले यस वर्ष नागरिकलाई देउसीभैलो नखेल्नु भनेको छ । तर सरकारका मान्छे र नेताहरु चाहिँ तिहार सुरु हुनु छ महिना अघिदेखि नै देउसीभैलो खेल्दैछन् । नेकपामा प्रचण्डसहितका ठूला पाँच भाइ धेरैजसो खुमलटारमा देउसी भट्याउने गीत बनाउँछन्, र खुमलटारमा बनाएको गीत बालुवाटार पुगेर देउसी र भैलीको भाकामा भट्याउँछन् ।
भारतको अघिल्तिर – फुच्चे नहोस् ।
स्रोत ः उज्यालाे